Isitatimende Sezokulinganiselwa Ezokuvikela ezindabeni zokudalulwa okwenziwe eNew York (eyaziwa nangokuthi yi-Free House Defense) - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli Bokuqothuka
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / ISitatimende Sokulinganiselwa Kwezovikelo zezindaba zokudalulwa kwezinto eNew York (okwaziwa nangokuthi yiFree House Defense)
August 16, 2016 Ukuvikelwa Kwemboni YeNew YorkShiya amazwanaUVeer Patel
Njengoba kuxoxwe ekungeneni kwethu kwebhulogi esedlule okudingida ukuthi ungayifaka kanjani impendulo eTrenton mayelana nezindaba zokudalulwa kombuso eSifundazweni sase-NJ, ummeli wesimo sezulu uVeer P. Patel uxoxa neSitatimende Sokulinganiselwa Kwezokuvikela ngezenzo zokudalulwa eNew York:
A isimiso sokulinganiselwa umugqa wesikhathi lapho isenzo kufanele senziwe enkantolo. Isibonelo, uma ukungcoliswa kuyiminyaka emibili, isudi yokungcola kufanele ilethwe kungakapheli iminyaka emibili lapho isigameko senzeka ngaphandle kwalokho.
Kunemikhakha emibili yezenzo zokubolekwa kwemali namanothi e-NJ. Esokuqala yisenzo sokuthola imali eyonakalisiwe embhalweni obhalwe phansi kanye nempahla ebanjiswayo. Lesi akusona isenzo sokwembula, kepha isenzo sokubuyisa imali efanele ngaphansi kwenothi. ENew Jersey, izinkantolo ezahlukahlukene zisingatha izindaba ezihlukile. Isigaba Sezomthetho sisingatha isenzo sokulimala kwemali, lapho kungalethwa khona isudi yemali ebhalwe kulo. ICandelo leChancery libheka isenzo sokwembulwa kwembeswa lapho isenzo singalethwa ekuthengiseni impahla ngempahla ebanjiswayo futhi ithole okuthengisiwe ukuze kukhokhwe imali ebanjisiwe.
Ngokwesenzo sokulimala kwemali ngaphansi kwenothi yokuphakamisa, inani lesilinganiso semikhawulo eNew Jersey yiminyaka eyisithupha phakathi kosuku lokuvuthwa uma usuku lokuvuthwa luqukethwe ngaphakathi kwenothi. Uma inothi lingenalo usuku lokuvuthwa, isenzo kufanele siqale kungakapheli iminyaka eyisithupha ngemuva kwesicelo esenziwe sokukhokha. Uma kungenasidingo esenziwayo, khona-ke inani lesilinganiso semikhawulo yiminyaka eyi-10 kusukela ngosuku lokugcina lapho ikhokhintela noma inzalo ikhokhelwe. NJSA 12A: 3-118 (a) isemboza lokhu ngokwengxenye.
Isimo sokukhawulelwa kokudalulwa okwenziwe eNew Jersey yilesi esedlule salokhu:
Iminyaka eyisithupha kusukela ngosuku olubekiwe lokwenza inkokhelo yokugcina noma usuku lokuvuthwa olusethelwe kwimalimboleko yempahla noma inothi, ibhondi noma esinye isibopho esiphethwe ngempahla ebanjiswayo;
Iminyaka ye-36 kusukela ngosuku lokuqoshwa kusuka ngosuku lokubulawa, inqobo nje uma imalimboleko ngokwayo inganikeli isikhathi sokukhokha ngaphezulu kweminyaka engu-30; noma
Iminyaka engu-20 kusuka ngosuku lapho umbolekisi ahluleka ukwenza noma yisiphi isibopho noma izivumelwano eziqukethwe kwimpahla ebanjiwe noma kumothi, ibhondi noma esinye isibopho esiphethwe ngempahla ebanjiswayo.
Uma ubhekene necala futhi ukhulume nommeli, shayela ihhovisi lethu e-18445333367 noma i-imeyili [Email protected]. Khuluma nomunye wabameli bethu maqondana nodaba lwakho lwembula Mahhala.
Umgomo Wokufuduka - I-Essay Yokuwina